Messi Oo Caawa Safanaya Kulankiisii 300-aad ee La Liga
HomeSpainMessi Oo Caawa Safanaya Kulankiisii 300-aad ee La Liga
15/02/2015 Abdiwahab Ahmed
Xiddiga reer Argentine Waxa uu isku diyaarinayaa inuu safto kulankiisii 300aad
Messi oo la tababaranaya kooxda Sabtidii
Kaliya waxa uu jiraa 27 sannadoo, waxaanu caawa Leo Messi safan doonaa kulankiisii 300aad ee horyaalka dalka Spain ee La Liga oo uu u ciyaari doono Barcelona marka ay garoonka Camp Nou isku haleelaan Levenate. Tababarihii hore ee Barca, Frank Rijkaard ayaa isaga oo ay da’diisu yartahay ku soo daray kooxda koowaad 10 sannadood ka hor; waxa aanu noqday da’yarkan reer Argentine ciyaartoygii saddexaad ee ugu da’da yaraa wakhtgaas, waxaanu saftay kulankiisii u horreeyey October 16, 2004 iyadoo lagu beddelay Deco ciyaar ka dhacday garoonka Olímpic Lluís Companys.
Guulihii uu gaadhay wixii wakhtigaas ka dambeeyey cidna lama barbar dhigi karo, waxa uu ku guuleystay oo uu magaciisu ku qoran yahay lix horyaalka La Liga oo uu kor ugu qaaday naadigiisa, waxa uu noqday laacibka ugu gool dhalinta badan taariikhda La Liga isaga oo dhaliyey 266 gool. Waxa uu goolal caawinta gaadhay rikoodhkii uu hore u dhigay Luis Figo oo ahaa 105 kubbadood oo goolal loo beddelay oo uu ka caawiyey ciyaartooyo kale in ay shabaqa ku hubsadaan.
Waxa hubaal ah in uu Messi kulanka caawa ka mid noqon doono kooxda rasmiga ah ee garoonka lagu bilaabayo, waxase la filayaa in isbeddel yar uu tababare Luis Enrique ku samayn doono kooxda, iyadoo Pedro lagu bilaabi doono ciyaarta, qaybta horena uu nasan doono Neymar sida ay aaminsan yihiin warbaahinta dalka Spain. Dani Alves oo ganaax ku maqan iyo Iniesta ayaa iyaguna aan diyaar ahayn.
Kooxda Levante ee Barcelona martida u noqon doontaa waxa ay horyaalka kaga jirtaa kaalinta 18aad iyadoo leh 19 dhibcood oo kaliya laakiin kalsooni ay ka heshay kulankii toddobaadkii hore ay 4-1 ku suul-daartay Malaga ayaa laga yaabaa in ay kor u soo yara qaado niyadda ciyaartooyada ee kulankan. Tababaraha Levante, Lucas Alcaraz wax aka maqnaan doona saddex ciyaartoy oo dhaawacan; Sissoko, Ivanschitz iyo El Zhar, waxa kale oo ganaax kaga maqnaan doono laacibka khadka dhexe ee Victor Camarasa.
Keylor Navas iyo Casemiro Oo Laga Waayey Garoonka Tababarka Real Madrid
07/09/2017 Abdiwahab Ahmed
Filippo Inzaghi: AC Milan Dhakhso Ayay Diyaar U noqon Doontaa
Video: Riyad Mahrez 2015
20/12/2015 Abdiwahab Ahmed